မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေ ကိုရီးယားမှာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ ရန်အောင် – Suehninsi
ပရိတ်သတ်နဲ့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် မင်းသားကြီး ရန်အောင်ကိုတော့ အားလုံးသိပြီး ဖြစ်ကြမှာပါနော်။ အခုချိန်ထိ လူပျိုကြီး ဘဝနဲ့ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ရန်အောင်ကတော့ အကယ်ဒမီ ဆုများစွာကို ရရှိထားတဲ့သူဖြစ်ပြီး အခုချိန်ထိလည်း တက်သစ်စတွေ လေးစားအားကျ အတုယူရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေသူပါ။ ယခုရက်ပိုင်းမှာတော့ ရန်အောင်ဟာ သူ့ရဲ့မျက်နှာကို
ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ပျံ့နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီသတင်းကို မီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာ ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ရန်အောင်က “အသားအရေကောင်းဖို့ Collagen သောက်ပါဆိုရင်တော့ သောက်တယ် မျက်နှာမှာတော့ ခွဲစိတ်ထားတယ်ဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ပရိသတ်တွေအထင်လွဲနေတာပါ ကျွန်တောကိုရီးယားသွားပြီး Surgery လုပ်တယ်ပြောတယ်
ကျွန်တော် Korea တော့သွားတယ် Surgery မလုပ်ဘူး စိုးစိုးနဲ့အတူတူသွားတာပေါ့ ဒါပေမယ့်စိုးစိုးလုပ်တယ် ကျွန်တော်မလုပ်ဘူး အမှန်တကယ်ကလုပ်ဖို့သွားတာပဲမလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာ ဟိုရောက်တော့ ဓာတ်ပုံတွေဘာတွေရိုက်ပြီးမှ ကျွန်တော်မလုပ်ချင်တော့လို့ ငြင်းခဲ့တာပါ စိုးစိုးကတော့ လုပ်ဖြစ်တယ် ခွဲပြီးထွက်လာတော့ ကမ္ဘာပျက်နေတာပဲ အရမ်းတော့လည်းမနာပါဘူး သူကိုယ်က နာတတ်တာလည်းပါတယ် သူတို့ဆီမှာကတော့
မိန်းကလေးတွေကားမောင်းလာတယ် ခွဲပြီးရင် သူတို့ကားသူတို့ကားမောင်းပြီး ပြန်ထွက်သွားတယ် စိုးစိုးကတော့ အပ်မြင်ရင်ကို အော်နေတာဆိုတော့ အဲ့လောက်ကြီးဆိုတော့သွားတာပဲ ကျွန်တော်ကတော့ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး မျက်နှာအသားအရေဆွဲတင်တာမျိုးတော့ လုပ်ဖြစ်တယ် လေးငါးခြောက်လတခါလောက်ပေါ့ အဲ့ဒါတောင်မလုပ်ဖြစ်တာတစ်နှစ်ကျော်ပြီ Facial Treatment တော့
လုပ်ဖြစ်ပါတယ် အသားအရေထိန်းသိမ်းတာမျိုးပေါ့ သူတို့ပေးတဲ့ ဆေးတွေလည်း လိမ်းဖြစ်ပါတယ် ကျန်တာတော့ ဘာမှမလုပ်ထားပါဘူး”. လို့ ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ရန်အောင်ကတော့ ကိုးရီးယားမှာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပေါ် လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း ဖြေရှင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
ပရိတျသတျနဲ့ အထူးမိတျဆကျပေးစရာမလိုအောငျ မငျးသားကွီး ရနျအောငျကိုတော့ အားလုံးသိပွီး ဖွဈကွမှာပါနျော။ အခုခြိနျထိ လူပြိုကွီး ဘဝနဲ့ ဖွတျသနျးနတေဲ့ ရနျအောငျကတော့ အကယျဒမီ ဆုမြားစှာကို ရရှိထားတဲ့သူဖွဈပွီး အခုခြိနျထိလညျး တကျသဈစတှေ လေးစားအားကြ အတုယူရတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျနသေူပါ။ ယခုရကျပိုငျးမှာတော့ ရနျအောငျဟာ သူ့ရဲ့မကျြနှာကို
ခှဲစိတျပွုပွငျထားတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှေ ပြံ့နှံ့လာခဲ့တာဖွဈပွီး ဒီသတငျးကို မီဒီယာတှနေဲ့တှဆေုံ့ရမှာ ပွနျလညျဖွရှေငျးလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ ရနျအောငျက “အသားအရကေောငျးဖို့ Collagen သောကျပါဆိုရငျတော့ သောကျတယျ မကျြနှာမှာတော့ ခှဲစိတျထားတယျဆိုတာတော့ မဟုတျပါဘူး ပရိသတျတှအေထငျလှဲနတောပါ ကြှနျတောကိုရီးယားသှားပွီး Surgery လုပျတယျပွောတယျ
ကြှနျတျော Korea တော့သှားတယျ Surgery မလုပျဘူး စိုးစိုးနဲ့အတူတူသှားတာပေါ့ ဒါပမေယျ့စိုးစိုးလုပျတယျ ကြှနျတျောမလုပျဘူး အမှနျတကယျကလုပျဖို့သှားတာပဲမလုပျဖွဈခဲ့တာ ဟိုရောကျတော့ ဓာတျပုံတှဘောတှရေိုကျပွီးမှ ကြှနျတျောမလုပျခငျြတော့လို့ ငွငျးခဲ့တာပါ စိုးစိုးကတော့ လုပျဖွဈတယျ ခှဲပွီးထှကျလာတော့ ကမ်ဘာပကျြနတောပဲ အရမျးတော့လညျးမနာပါဘူး သူကိုယျက နာတတျတာလညျးပါတယျ သူတို့ဆီမှာကတော့
မိနျးကလေးတှကေားမောငျးလာတယျ ခှဲပွီးရငျ သူတို့ကားသူတို့ကားမောငျးပွီး ပွနျထှကျသှားတယျ စိုးစိုးကတော့ အပျမွငျရငျကို အျောနတောဆိုတော့ အဲ့လောကျကွီးဆိုတော့သှားတာပဲ ကြှနျတျောကတော့ မလုပျဖွဈခဲ့ပါဘူး မကျြနှာအသားအရဆှေဲတငျတာမြိုးတော့ လုပျဖွဈတယျ လေးငါးခွောကျလတခါလောကျပေါ့ အဲ့ဒါတောငျမလုပျဖွဈတာတဈနှဈကြျောပွီ Facial Treatment တော့
လုပျဖွဈပါတယျ အသားအရထေိနျးသိမျးတာမြိုးပေါ့ သူတို့ပေးတဲ့ ဆေးတှလေညျး လိမျးဖွဈပါတယျ ကနျြတာတော့ ဘာမှမလုပျထားပါဘူး”. လို့ ပွောပွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ ရနျအောငျကတော့ ကိုးရီးယားမှာ ခှဲစိတျပွုပွငျမှုတှေ လုပျခဲ့တယျဆိုတဲ့အပျေါ လုံးဝမဟုတျကွောငျး ဖွရှေငျးလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော အဆုံးထိဖတျရှုပေးကွတဲ့ပရိသတျကွီးကိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျနျော
ကင်မရာကို ကြည့်ပြီး ခဏခဏ ရယ်လိုက်ပြုံးလိုက်နဲ့ ကြာလာတော့ ပရိသတ်တွေ မပြောနဲ့ ကိုယ့်မျက်နှာ ကိုယ်တောင် ပြန်မကြည့်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ နေတိုး
ကျော်ရဲအောင်နဲ့အတူ ဟာသလေးတွေပြောရင်း ပျော်ပျော်ရွင်ရွင် ဈေးရောင်းနေကြတဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာတို့ ညီအမသုံးယောက်